Thelekisa iinkqubo zokuqalisa ze-CAD / GIS-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ukuziqala iinkqubo lokuthelekisa CAD / GIS
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskGoogle umhlaba / imephuGvSIGGIS asiboniseMicrostation-Bentleyqgis
Lo ngumsebenzi phantsi kweemeko ezifanayo, ukulinganisa ixesha elithathayo ukuqala inkqubo kwiqhosha kwi icon uze umzuzu usebenza.
Ngeenjongo zokuthelekisa, ndisebenzise eqala kwelona lifutshane ixesha, emva koko (ujikeleze) umqondiso wamaxesha ngokunxulumene nayo. Ayenzelwanga ukufikelela kwizigqibo, kuba umatshini wam ohluphekileyo ulayishwe kakhulu ziinkqubo, kodwa ewe, zonke zilinganiswa phantsi kweemeko ezilinganayo.
I-Windows XP Professional, i-Intel Core 2 Duo, kunye ne-2.19 Ghz kunye ne-1 GB ye-RAM.
Ngokuqinisekileyo kukho iinkcukacha ezithile eziza kuthethelela ukulibaziseka kwezinye, kodwa ndiyishiya kwintando yakho ekhululekileyo. Bashiywe ngaphandle kweArcGIS kunye neTatukGIS endiya kufuna ukuyifaka, kodwa ayifakwanga.
I-GIS 7x Imizuzwana ye8 1
I-Arc View 3.3 Imizuzwana ye10 1.25 maxesha
Microstation V8.5 Imizuzwana ye12 1.5 maxesha
I-Microstation Geographics V8.5 Imizuzwana ye18 2 maxesha
Microstation V8i Imizuzwana ye26 3 maxesha
Google Earth 5.1 Imizuzwana ye37 5 maxesha
I-GUM ye-Quantum Imizuzwana ye43 5 maxesha
AutoCAD 2009 Imizuzwana ye44 5 maxesha
Bentley Imephu V8i Imizuzwana ye66 8 maxesha
gvSIG 1.9 Imizuzwana ye72 9 maxesha
AutoDesk Civil 3D 2008 Imizuzwana ye84 10 maxesha
I-Google ihamba kwi-Facebook kunye ne-Twitter
Yintoni entsha kwi-AutoCAD Civil 3D 2009